Xaaladda naafanimada, rabshadaha lammaanaha iyo taageerada bulshada ee haweenka guursaday ee ku nool saddexda degmo ee gobolka Terai ee Nepal - Equal Access International
Baadhitaanno ayaa lagu ogaadey in dumarka naafada ah ee soo sheegay naafo aad u daran ay u badan tahay inay ka warbixiyaan qaabab badan oo rabshado wadaag ah (IPV) iyo rabshado laga soo qaado sharciga, marka loo eego haweenka naafada ah ee soo tabiya qaar naafo ah. Sidoo kale, dumarka leh xoogaa itaal darran waxay u badan tahay inay soo sheegaan qaar ka mid ah noocyada IPV-ga marka loo eego haweenka aan naafada lahayn. ”
Haweenka naafada ah ee naafada ah ayaa si aan ku habboonayn ugu nugul rabshadaha lammaanaha (IPV). Si kastaba ha noqotee, cilmi-baaris aad u yar ayaa lagu sameeyay goobaha dakhligoodu hooseeyo iyo kuwa dhexe. Warqadani waxay dooneysaa inay wax ka qabato farqiga macluumaadka iyadoo la adeegsanayo xogta aasaasiga ah ee ka socota EAI Isbedelku wuxuu ku bilaabmayaa guriga wax ka barta Nepal si loo baaro xiriirada u dhexeeya heerarka kaladuwan ee naafonimada iyo IPV iyo rabshada gacanta sharciga. Warqadda ayaa sidoo kale eegaysa sida ay u taageerto haweeneyda laxaadka la'a ee u aragta reerkeeda iyo soddoggooda inay ahaanayaan, qaasatan marka loo eego waaya aragnimadeeda IPV.
Ku dhawaad ​​kalabar haweenka naafo ah (41.6%) iyo hal seddexdii dumar ah oo leh xoogaa naafada ah (31.7%) ayaa soo tebiyay dareenka IPV ee sanadkii la soo dhaafay, marka la barbar dhigo 26.5% haweenka naafada ah ”
Baadhitaan laga sameeyay gobollo badan oo adduunka ah ayaa muujinaya in dadka laxaadka la'a ay la kulmaan gaaritaan waxbarasho, dakhli yar, xaalad bulsho oo hooseysa iyo natiijooyin caafimaad oo ka xun kuwa naafada ah. Marka laga soo tago natiijooyinkaan caafimaad iyo bulsheed, tiro haween ah oo naafada ah ayaa la kulma rabshado sokeeye (IPV).
Xaashidan waxay ku dhisan tahay suugaanta jira ee IPV iyo naafanimada iyada oo la adeegsanayo falanqaynta xogta aasaasiga ah ee daraasadda Isbadalada Guriga oo ay kujirto tijaabooyin la xakameeyay oo aan kala go 'lahayn (RCT) oo laga fuliyey saddex degmo oo ku yaal Galbeedka iyo Bartamaha Bartamaha. Ujeeddada warqaddani waa (1) diiwaangelinta baahinta haweenka da'doodu u dhaxayso 18–49 ee soo sheega inay ku nool yihiin naafonnimo degmooyinkaas, (2) inay baaraan ururrada u dhexeeya heerka naafada iyo khibradaha IPV ee sanadkii la soo dhaafay, iyo (3) ) isbarbar dhig taageerada bulshada ee loo arkaa inay heli karto IPV haweenka dhexdooda ku saleysan heerka naafada.
Waxyaabihii Muhiimka ah:
Haweenka naafada ah waxay si aan caadi ahayn ugu nugul yihiin rabshadaha lammaanaha
Markiiba ay aad u sii yaraaneyso naaafinta, ayay haweenka u nugul yihiin in ay la noolaadaan rabshado lammaane
Ilaha laga helo taageerada bulshada ayaa ku kooban haweenka naafada ah ee soo maray rabshadaha xiriirka lamaanaha
Caawinta bulsheed ee la kasbado waxay sidoo kale ku kala duwan tahay darnaanta naafonimada, si marka ay aad ugu sii xumaato laxaad la’aanta, ayay u badan tahay in haweenku ay soo sheegaan in ay leeyihiin soddoh taageerayaal ah.
Baahida haweenka naafada ah waa in, sidaa darteed, lagu dhex daraa ka hortagga rabshadaha wadaagga ah ee wadaagga ah iyo shaqada faragelinta ee dalalka dhaqaalahoodu hooseeyo si loo ogaado xaaladda naafanimada, loo hubiyo in adeegyadu ay heli karaan haweenka naafada ah isla markaana ay ku xisaabtamaan kala duwanaanshaha khibradaha gacansaarka lamaanaha. haweenka qaba heerar kala duwan oo naafanimo ah.
Ku soo dejiso maqaalka halkan